Gịnị Ka Ịdị Nsọ Pụtara?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Batak (Toba) Bislama Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
Ihe na-agbata n’uche ma a nụ okwu bụ́ “ịdị nsọ” bụ ihe a na-emerụghị emerụ, ma ọ bụ ihe e dopụrụ iche. Okwu Hibru a sụgharịrị ka ọ bụrụ “ịdị nsọ” si n’okwu pụtara “ịnọpụ iche.” N’ihi ya, ihe dị nsọ bụ ihe e dopụrụ iche, ma ọ bụ ihe e ji kpọrọ ihe n’ihi na ọ dị ọcha, e merụghịkwa ya emerụ.
Chineke dị nsọ otú na-enweghị atụ. Baịbụl sịrị: “Ọ dịghị onye dị nsọ nke dị ka Jehova.” * (1 Samuel 2:2) Ọ bụ ya mere o ji bụrụ naanị Chineke ga-ekpebi ihe dị nsọ.
E nwere ike ikwu na ihe ọ bụla gbasara Chineke “dị nsọ,” karịchaa ihe ndị gbasara ofufe ya. Dị ka ihe atụ, Baịbụl kwuru gbasara:
Ebe ndị dị nsọ: Chineke gwara Mozis okwu ná nso osisi ahụ na-ere ọkụ, sị: “Ebe i guzo bụ ala nsọ.”—Ọpụpụ 3:2-5.
Ememme ndị dị nsọ: Ụmụ Izrel oge ochie fere Jehova n’ọtụtụ ememme ndị ha mere, ndị a kpọrọ “mgbakọ dị nsọ.”—Levitikọs 23:37.
Arịa ndị dị nsọ: A kpọrọ ihe ndị e ji fee Chineke n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem oge ochie ‘arịa ndị dị nsọ.’ (1 Ndị Eze 8:4) Ọ bụ eziokwu na e kwesịghị ife arịa ndị a dị nsọ ofufe, e kwesịghị iji ha egwu egwu. *
Onye na-ezughị okè ọ̀ ga-adịli nsọ?
Ee. Chineke nyere Ndị Kraịst iwu, sị: “Unu ga-adị nsọ, n’ihi na adị m nsọ.” (1 Pita 1:16) N’eziokwu, ụmụ mmadụ na-ezughị okè agaghị adịli nsọ otú ahụ Chineke dị. Ma, a ka nwere ike ịgụ ndị na-erubere Chineke isi ka ndị dị ‘nsọ, ndị dịkwa Chineke mma.’ (Ndị Rom 12:1) Onye na-agbalị ịdị nsọ na-egosi ya n’okwu ọnụ na n’omume. Dị ka ihe atụ, onye ahụ na-eme ihe Baịbụl kwuru ka anyị ‘doo onwe anyị nsọ ma zere ikwa iko’ nakwa ka anyị ‘dị nsọ n’omume anyị niile.’—1 Ndị Tesalonaịka 4:3; 1 Pita 1:15.
Mmadụ ò nwere ike ịdịgide nsọ kwụsị?
Ee. Ọ bụrụ na mmadụ akwụsi ime ihe ndị Chineke nyere n’iwu, Chineke ga-elezi onye ahụ anya ka onye na-adịghịzi nsọ. Dị ka ihe atụ, a kpọrọ ndị e degaara akwụkwọ Baịbụl bụ́ Hibru ‘ụmụnna ndị dị nsọ.’ Ma, n’agbanyeghi nke ahụ, a dọrọ ha aka ná ntị na ma ha akpacharaghị anya, ha nwere ike “inwe ajọ obi nke na-enweghị okwukwe site n’ịhapụ Chineke dị ndụ.”—Hibru 3:1, 12.
Ihe ndị na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara ịdị nsọ
Ụgha: Naanị otú mmadụ ga-esi adị nsọ bụ ma ọ na-ata onwe ya ahụhụ.
Eziokwu: Baịbụl kwuru na mmadụ ‘ịta onwe ya ahụhụ’ enweghị ‘uru ọ bara n’anya Chineke.’ (Ndị Kọlọsi 2:23) Kama nke ahụ, Chineke chọrọ ka anyị jiri ihe ndị dị mma na-eme onwe anyị obi ụtọ. “Ka onye ọ bụla na-eri ihe, na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, na-ahụkwa ihe ọma n’ihi ịrụsi ọrụ ike ya niile. Ọ bụ onyinye Chineke.”—Ekliziastis 3:13.
Ụgha: Mmadụ ga-aka adị nsọ ma ọ bụrụ na ọ lụghị di ma ọ bụ nwunye.
Eziokwu: N’agbanyeghị na Onye Kraịst nwere ike ikpebi na ya agaghị alụ di ma ọ bụ nwunye, ọ bụghị ya ga-eme ka ọ dịrị nsọ n’anya Chineke. N’eziokwu, ndị na-alụghị di ma ọ bụ nwunye nwere ike iji obi ha niile na-efe Jehova n’enweghị ihe ga-adọpụ ha uche. (1 Ndị Kọrịnt 7:32-34) Ma, Baịbụl kwukwara na ndị lụrụ di ma ọ bụ nwunye nwere ike ịdị nsọ. Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, otu n’ime ndịozi Jizọs, ya bụ Pita, lụrụ nwaanyị.—Matiu 8:14; 1 Ndị Kọrịnt 9:5.
Ebee ka e si nweta okwu bụ́ “Baịbụl Nsọ”?
Kemgbe ụwa, ihe mere e ji akpọ okwu si n’ọnụ Chineke, nke e dere n’akwụkwọ, “Baịbụl Nsọ” ma ọ bụ “Akwụkwọ Nsọ,” bụ n’ihi:
Ebe o si. “Ndị mmadụ kwuru ihe Chineke mere ka ha kwuo mgbe mmụọ nsọ na-edu ha.”—2 Pita 1:21.
Ihe dị na ya. “Ihe Jehova nyere n’iwu dị ọcha, na-eme ka anya na-enwu gbaa. Egwu Jehova dị ọcha, ọ na-adịru mgbe ebighị ebi.”—Abụ Ọma 19:8, 9.
Ọ bụ ihe ndị a mere e ji nwee ike iwere Baịbụl ka ihe dị nsọ. Ihe mere o ji dị iche n’akwụkwọ ndị ọzọ bụ n’ihi na ihe ndị e dere na ya dị nsọ, e jirikwa ya na-efe Chineke.
^ par. 2 Jehova bụ aha Chineke. Ọtụtụ amaokwu Baịbụl kwuru na aha a bụ ihe “dị nsọ.”
^ par. 6 Baịbụl katọrọ ife ihe ndị nọwara kemgbe oge ochie e ji jeere Chineke ozi ofufe.—1 Ndị Kọrịnt 10:14.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka Ịdị Nsọ Pụtara?
ijwbq isiokwu 137
M̀ Kwesịrị Ikpegara Ndị Sent Ekpere?